DAANDIWWAN SARARA (ONLINE) QARSHII ARGANNU - Wanofi.com
Jaarraan amma nuti keessa jirru yeroo keenya osoo hin qisaasin, baasii kiisii keenyaas osoo garmalee hin baasiin tekiniloojiin haalota hedduu mijeessee mana ofii teenyee galii adda addaa sarara irraa argachuun yeroo itti danda’ameedha.
Dhaloota ammaaf tekinoloojiin bu’aa gurguddaa hojii salphisuun haala salphaatiin qarshii hojjennee argachuu keessatti tajaajila guddaa kennaa jira. akkaataan nuti itti milkaa’aa jirru dandeettii fi akkaataa hubannoo keenyaan haa tahuyyuu malee namni dhuunfaa, gurmaa’insi, dhaabbannii fi mootummaan kamiyyuu bu’aa hedduu kara teknoloojiitiin argataa jira. kana keessatti jabaannee yoo hojjenne daandiwwan hedduu sarara irraa qarshii hojjechuu dandeenyu kumaatamaan lakkaawamu jiru.
Akkasuma waanti nuti hojjennee sarara (online) qarshii argannus hedduutu jiru. Garuu asirratti deemsa teknoloojii kana keessatti waan sammuu keenya madaaluu fi dandeenyu hojjechuun ala waan nutti ulfaatuu fi saffisaan hubannee hojjechuu hin dandeenye yoo itti seenne bu’aan isaa yeroo keenya fixuu, sammuu keenya dadhabsiisuu, kasaaraa adda addaatu nu mudata. Kanaaf waantota sasalphoo tahan qofa irratti xiyyeeffachuudhaan dursa kan itti milkaa’uu qabnu yaadaan qabuudha.
. SUURAA SARARA IRRATTI BAASNEE GURGURUUDHAAN QARSHII NII ARGANNA
Kana jechuun suuraa mataa keenyaa kaameeraa keenyaan kaasnee gurguruus kan dandeenyu akkasuma sarara internet irraa “ Pexel”, “Unsplash”,”Pixapay”,”Rawpixe”,”Reshot”, “stockvault” irraa suurawwan babareedoo erga buufannee booda bakki nuti itti dhiyeessinee gurguruu dandeenyu ammoo “ ShutterStock” kan jedhamu irrattiidha. Garuu seerota mataa isaa nii qabaata. Suuraan keenya seer asana eegee achirra galeera yoo tahe “Approved” nuuf taanan kaffaltii nii arganna jechuudha.
2. QAJEELCHA (DESIGN) ADDA ADDAA HOJJENNEE QARSHII NII ARGANNA
Qajeelcha garaagaraatu jira.Muraasni Asxaa” Logo” haa fudhannu. Qajeelcha loogoo (Logo
Design) hojjennee sarara irratti nii gurgurra. Logo salphaatti kan hojjennu sarara internet
“Canva” deemnee hojjechuudhaan erga buusne booda dhaabbata kanneen namootni hedduun qajeelcha loogoo bituuf barbaadanitti dhiyeessina. Isaan website sadii isiniif kenna
Website kanneen irratti loogoo ykn asxaa bifa bareedaa taheen hojjennee gurguruu dandeenya. Qajeelcha (design) kan biraan “Pattern Design” hojjechuu dandeenya. Kun namootni design kana isin bitanii bifa hucuutiin print godhanii baasuuf kan barbaadamuudha. Pattern design bakki irraa hojjetamu salphaatti click qofaan gara website “Flaticon” deemtanii “emojji” irraa salphaatti pattern design kana hojjettanii gara website oli sadeen sanattis gurguruu dandeessu.
Kun qajeelcha (design) adda addaa hojjennee kan gurgurruudha.
3. BARRUU(ARTICLE)BARREESSUUDHAAN ONLINE QARSHII NII ARGANNA
Barruu gabaabaa jechoota 200 haga 1000 tahu barreessuudhaan website adda addaaf dhiyeessinee kaffaltii argachuu dandeenya. Akkasuma namootni website isaaniif barruulee barbaadanis waan jiraniif isaaniifis dhiyeessuun nii danda’ama. Akkaataan nuti barruu kana fayyadamuu dandeenyu yoo ofii keenya teenyee waan haalaa fi yeroo waliin deemu tokko barruu barreessinee dhiyeessine irra filatama.
Garuu yoo kun ulfaate gara google news deemuudhaan waan amma ykn dadiiqaa muraasa dura maxxanfame ilaallee koppii erga goone booda nama waan kanabarreessee dhoobe waliin akka koppii paste hin taaneef gara Spinbot jedhamu deemnee guutumman guutuu barruu koppii goonee sana jijjiiruudhaan bakka itti barruu kana dhiyeessinee gurgurrutti deebina jechuudha. Barruu (Artcile) iddoon itti dhiyeessinee submit goonu hedduutu jiru kanneen filatamoon garuu
TextBroker fi kkf dha.
Akka seera mataa isaaniitti deemnee barruu kana bakka itti submit ykn email kaampaanota kanaatti erginee kaffaltii akkaataa seera kaa’ametti eeggachuu dandeenya.
4. SURVEY ADDA ADDAA HOJJECHUUDHAAN QARSHII NII ARGANNA
Kana jechuun gaaffiwwan adda addaa haala jireenya nama tokkoo irratti hundaa’uudhaan gaaffiwwan xixxiqqaa dhiyaatantu jiru isaan kana deebisnee qarshii argachuu dandeenya. Bifa mosaajii (App)tiin gaaffiwwan hedduu kan ofirraa qaban website gaariin irraa galii argachuu dandeenyu “Ysense” kan jedhamu irraa haala salphaatiin qarshi hojjennee kan argachuu dandeenyuudha. Asirratti gaaffii qofa deebisuu osoo hin taanee application akka buufattan isin ajaja sana booda gara mobaayila keessanii yeroo isin download gootan kan kaffalaa deemuudha jechuudha. Akkasuma galtee(Task) kan qabuudha.
5. GALMAA’UU QOFAAF KAFFALTII QARSHII NII ARGANNA
Website irratti waan galmoofne qofaaf nuuf kaffalamu jira. Website kannee irra hojii iddoo tokko barbaachisoo hedduu argachuu dandeenya sababa saniif gara website kanaa dhufnee gaafa irratti” Sign Up” taanu kan nuuf kaffalu jira. isaan kanaaf website gaggaarii tahan arfan tokko isinii qabadhee jira. isaanis
Jedhamu. Yeroo baayee kan isaan kaffalaniif “ welcome bonus” jedhameetu beekama.
Akkasuma namootni gara website kanaatti akka wal afeeraniif jedhamee yaadameeti.
1. WHATSAPP irraa dhoksaan kan chat ilaalu DOWNLOAD
2.APP online nama hordofuu DOWNLOAD
2 thoughts on “DAANDIWWAN SARARA (ONLINE) QARSHII ARGANNU”
Eyye hojjechu nin barbaada
Eeyyeen bilbilakeessan naaf ergaa odeeffannoo dabalataaf